संसद पुन: स्थापना वा निर्वाचन ? काँग्रेसमा सस्थापन र सस्थापन इत्तरको फरक वोली – ThePressNepal
संसद पुन: स्थापना वा निर्वाचन ? काँग्रेसमा सस्थापन र सस्थापन इत्तरको फरक वोली
काठमाडौं माघ २९ । संसद पुन स्थापना वा निर्वाचन भन्ने विषयमा कांग्रेस सस्थापन तथा सस्थापन इत्तर फरक फरक मत देखिएको छ । सस्थापन पक्ष संसद पुन स्थापना वा निर्वाचन जे भएपनि मौन रुपमा स्विकार्ने पक्षमा देखिदा सस्थापन इत्तर भने सडकबाटै संसद पुन स्थापना गराएरै छोड्ने दावी गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि असंवैधानिक कदम भएको निस्कर्ष निकालेको प्रतिपक्षी काँग्रेस संसद पुन स्थापना वा निर्वाचन भन्ने विषयमा भने विभक्त भएको छ । पार्टि भित्र कुनै विवाद नभएको दावी गरे पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतको विषयमा कांग्रेस नवोल्ने प्रष्ट पार्दैं आएका छन् बिहिबार नेपाली कांग्रेस, आदिवासि जनजाति केन्द्रिय विभाग, नेपाली आदिवासी जनताजी संघले आयोजना गरेको नेपाली कांग्रेस र आदिवासी जनजातीको सवाद विषयको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतको विषयमा नवोल्ने भन्दै निर्वाचन वा संसद पुन स्थापना दुवैका लागि काँग्रेस तयार हुनु पर्ने जिकिर गरे ।
तेस्तै उप-सभापति विमलेन्द्र निधिले निर्वाचनमा वा पुन स्थापना दुवै बाटो खुल्ला भएको दावी गरे । निधिले प्रतिगमन विरुध आन्दोलन नै गरेन भन्ने विषय गलत भएको दावी गर्दै काँग्रेसले राष्ट्रिय आन्दोलन गरेको जिकिर गरे । राष्ट्रियताको विषयमा कमन्युष्ट भन्दा काँग्रेस अघि रहेको उनको भन्दै उपसभापति निधिले काँग्रेस मात्र एउटा पार्टी रहेको जुन वडा वडामा पुगेको दावी गरे । तेस्तै सह महामन्त्री डा प्रकाश शरण महतले पनि दुवै विकल्प काँग्रेसका लागि खुल्ला रहेको भन्दै निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आग्रह गरे ।
तर नेताहरुले दुवै विकल्प खुल्ला रहेको भनिरहदाँ दोस्रो तथा तेस्रो तहका नेताहरु भने कांग्रेसको भुमिका प्रति असन्तुष्ट देखिन्थे । नेपाल आधिवासी जनजाती संघका सभापति इन्द्रबहादुर गुरुङले कांग्रेसको भुमिकामा प्रश्न गर्दै आन्दोलनमा नगएकोमा रुष्ट प्रकट गरे । तर सस्थापन इत्तरका नेताहरु भने सडकबाटै संसद पुन स्थापना गर्नु पर्ने पक्षमा छन् ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, गगन थापा लगायतका नेताहरु भने अदालतको विषयमात्र नभइ जनताको विषय भएको भन्दै यसको विरोधमा उत्रन औपचारिक कार्यक्रमबाटै नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरिरहेका कारण कांग्रेस भित्रको किचलो प्रष्ट देखिएको हो ।
Tags: काँग्रेस निर्वाचन पुन: स्थापना संसद सस्थापन सस्थापन इत्तरको
Previous २०७७ माघ २९ बिहीबारकाे राशिफल, आजको दिन तपाईंका लागि कस्तो रहला ?
Next संसद पुन स्थापना वा निर्वाचन दुवैका लागि काँग्रेस तयार हुनु पर्छ -सभापति देउवा